KMF/Cnoe : tsy fanonganam-panjakana ny fiaraha-midinika (NewsMada) | AEMW
KMF/Cnoe : tsy fanonganam-panjakana ny fiaraha-midinika (NewsMada)
Hanao ahoana ihany ny hoe fikaonandoham-pirenena? Matahotra fanonganam-panjakana ny mpitondra. Tsy izany io, raha ny hevitry ny KMF/Cnoe.
« Ny zava-misy aloha amin’izao fotoana izao, mikaikaika avokoa ny olona rehetra amin’ny ankapobeny. Mikaikaika amin’ny vidim-piainana, ny tsy fandriampahalemana, ny antsojay samihafa… »
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly vonjimaika eo anivon’ny KMF/Cnoe, Rabekijana Félix, teny amin’ny foibe toerany, Antanimena, afakomaly, manoloana toe-draharaham-pirenena amin’izao fotoana izao.
Manoloana izay rehetra izay, miteny ny mpanao politika, ny firaisamonina sivily, ny mpitondra fivavahana… hoe handao hifampidinika. Mitaky ny olona hoe handao hiara-kikaondoha.
« Tsy midika izany hoe andao hanao Tetezamita, na hanao fifidianana, na hanongam-panjakana… « hoy izy. Fa andao hiara-kitady hevitra hialana amin’izao fahasahiranam-bahoaka izao. Maniry izany indrindra ny KMF/Cnoe.
Tombontsoan’ny mpitondra ny fiaraha-midinika
« Ho tombontsoa ho an’ny mpitondra am-perinasa ny manatanteraka izay fiaraha-midinika izay, raha mizotra tsara any amin’izany hevitra hiara-manapaka izany », hoy ihany izy. Mandeha tsara any amin’ny fitondrana tsara tantana ny mpitondra amin’izany, ary amin’ny fangaraharana sy tany tan-dalàna.
Tombontsoa ngezabe ho an’ny mpitondra ho amin’ny fifidianana manaraka ny fiaraha-midinika, raha mahatanteraka izany izy. Raha sanatrian’ny vava ka miziriziry amin’ny heviny eo izy, raha ny zava-misy amin’izao fotoana izao no iainana, miahiahy ihany ny KMF/Cnoe: sarotsarotra ho an’ny mpitondra ny mbola ho tafaverina amin’ny fifidianana, taona 2018, fa tsy mandray ny fiaraha-midinika hanasoavana ity firenena ity.
Fiarovan-tseza no mahamaika ny mpitondra
Oviana mihaino ny fitarainana sy ny filazana ny marina aminy ny mpitondra? Matahotra fanakorontanana sy fanonganam-panjakana hatrany fa tsy marin-toerana, tsy matoky tena… Manao izay hitana sy hitantana fahefana mandra-pahatapitry ny fe-potoam-piasana, taona 2018, fotsiny sisa?
← Ali Abdou – Nosy Mayotte : tokony hajain’i Frantsa ny lalàna iraisam-pirenena (NewsMada)
Tsy tanteraka ny fampanantenana : mandrangaranga fitokonana indray ny mpirakidraharaha fitsarana (NewsMada) →